KUSVIRA kwandakaita Nurse vepaChinhoyi tasangana Mubhazi – Makuhwa.co.zw
KUSVIRA kwandakaita Nurse vepaChinhoyi tasangana Mubhazi
Muupenyu mukanzwa baba vachirambidza mukadzi wavo kuenda Joni or kubuda kunze kwenyika baba vachisara kumba vega pane zvavanenge vakanzwa mukufamba uku.
Inini it was different vakomana ndainge ndaronga rwendo rwangu kuenda Zambia. Mazuva aya nyika yedu zvinhu zvanga zvakuoma saka taipota tichienda kunotengesa mafoni kuZambia.
There was only one bus raienda kuZambia raiva Zupco, ndakapinda mubhazi raisimuka kuma 8 husiku. Ndanga ndakagara zvangu neCousin yangu pakaita mumwe musikana aiva nurse wepachinhoyi handizive kuti ainge atopedza here or she was still a student. Nurse uyu was on her way to Zambia achiperekedza sisi vake nemurume wavo. Takatanga kutaura hedu ini ndikati ndione hunu hwake ndikaona kuti she was free plus aida zvekubatwa batwa. Ndainge ndirichirimutsva munyaya dzevakadzi idzi , cousin yangu akabva ati iwe bata mwana uyo asi ini ndaita ndichitya coz tainge tasanga mubhazi nanurse ava.
Bhazi rakamira for a break nurse vaida kuita weti ndikabuda navo so i waited thinking she was going kure neni ndakaona munhu apfugama close to me akandibata ruoko achizvibatsira,inini ndakabva ndati apa zvaita. bhazi rakadzokera paroad at this time i had the go ahead apa sevanhu vainge vakagara kuback seat munhu aiiti inini handiite zvekubatana nevanhu vandangosangana navo. Asi zvainge aita tabuda panze gave me the strength kuti ndiite nhubu chaiyo.
Tatifambeyi ndakatanga kuita hunhubu huya babe rakatanga richinyara vanhu sevanhu vaiva nubhazi asi hwaiva husiku hapana vanhu vaiona sisi vake vakambodeedzera vakati imi murikuitei ikoko asi takaseka hedu sevanhu vasina zvavaiita. Sezvamunoziva panofambwa manheru vanhu vanenge vane maBlankets and that blanket was our cover. Imi vakomana ndakaona nurse vakushinyira ndikazoisa tshirt mukanwa kuti vasaite noise nekuti zvaitonge zvaipa ndakabata mwana kusvikira akuda kusvirwa mubhazi imomo. Pese apa can you believe we didn’t even know each others names varume zvinoitika mumabhazi umu… guyz think twice wen your wife or girlfriend is going away. This started in the bus , what do you think happened tapfuura border tavakuZambia…. to be continued….
Related Topics:KUSVIRA kwandakaita Nurse vepaChinhoyi tasangana Mubhazi
Shocker as goat gives birth to kid with human head